UGANDA: Amar adag oo la dhul dhigay askar ku biireysa AMISOM | KEYDMEDIA ONLINE
UGANDA: Amar adag oo la dhul dhigay askar ku biireysa AMISOM
Askartan oo sumadoodu tahay BG 33-aad waxay beddeli doonaan dhigooda BG 30-aad oo iyagu dhamaystay howl-gal muddo hal sanno ah ay qeyb kaga ahaayeen Ciidanka AMISOM.
KAMPALA, Uganda - Tiro dhan 1,848 oo askari ayaa dhawaan loo soo daabulayaa Somaaliya, si ay ugu biiraan Howl-galka Nabad-ilaalinta ee AMISOM. General Wilson Mbasu Mbadi, oo ah taliyaha ciiddanka difaaca Uganda ayaa ciidamadan kula dardaarmay inay muujiyaan taxaddar dheeraad ah marka ay tagaan Soomaaliya.
“Cuntada iyo hubkiina haka iibinina Soomaalida, iska jira idinka ayay dib idin kugu soo weerari doonaan, waa arrin waalli ah inuu askarigu iska iibiyo hubkiisa iyo cuntadiisa.” ayuu yiri General Wilson Mbasi Mbadi oo la hadlay cutubkan dhammeystay tabbabarkooda.
Xarunta Hawlgalka Taageerada Nabadda ee Singo (Peace Support Operation Center), ayaa lagu qabtay munaasabadda tabbabarka loogu soo xirayay ciidanka. Kolonel Ibrahim Byarunhange ayaa taliye u ah ciidankan Soomaaliya loo soo dirayo.
Uganda waa dalkii ugu horreeyay ee ciidamo nabad ilaalin ah u soo dira Soomaaliya, cutubkii ugu horreeyay ayaana soo gaaray dalka sannadkii 2007 , tan iyo intaas waxaa Soomaaliya kaga dhintay labaatameeyo askar.
Ciidamada AMISOM oo ka kooban dalalka Uganda, Burundi, Ethiopia, Djibouti iyo Kenya, ayaa lagu eedeeyaa in ay kaliya mashruuc u arkaan howl-galka nabad- ilaalinta Soomaaliya, halkii ay kaalin muuqata ku yeelan lahaayeen la dagaallanka Al-shabaab.